सरुवाको १५ दिनपछि बल्ल मन्त्रालय पुग्यो पत्र, आउन नछाडेपछि कार्यकक्षमा ताला – Health Post Nepal
२०७५ कार्तिक ११ गते १५:५२
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको दूरी कति होला ? पैदल हिँड्दा पनि १० मिनेटमा जोकोही पुग्न सक्छ । तर, एउटा महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालय पुग्न २ साता लाग्यो । यद्यपि, बीचमा ५ दिन दसैँको सरकारी बिदा थियो ।
प्रसंग स्वास्थ्यसचिव सरुवा निर्णयको हो । २८ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूह (जगेडा)मा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो सरुवाको पत्र गत शुक्रबार (९ कात्तिक)मा मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको छ । सो पत्रको कार्यान्वयन भने आइतबार (आज) मात्रै सुरु भएको छ ।
सरुवाको निर्णय सार्वजनिक भइसकेपछि पनि स्वास्थ्यसचिव डा. चौधरीले शनिबारसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उपस्थित भएर काम गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । यसबीचमा उनले अधिकांश विवादित फाइल लगेको समेत मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरुवा भइसकेको मान्छे शनिबारसमेत अबेरसम्म मन्त्रालयमा बसेर काम गरिरहेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सचिवको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिएका छन् । ‘सरुवाका कुरा बाहिर आए पनि पत्र नगएपछि उनलाई किन आएको भन्न मिलेन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘आइतबार सरुवाको आधिकारिक पत्र पुगेपछि बल्ल ताला लगाइयो ।’
मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख जनार्दन गुरागाईंले आफूकहाँ आजै मात्र पत्र पेस भएको बताए । ‘मकहाँ आजै पत्र पेस भएको छ’ उनले भने । डा. चौधरीले रमाना बुझे–नबुझेबारे भने उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘रमाना बुझ्नुभएको छैन होला, म पनि मन्त्रालयमा छैन, बुझिसकेर मलाई जानकारी नभएको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै विवादित बनेकी डा. चौधरी पछिल्लो समय पूर्वाधार नपुगेको काठमाडौं नेसनल कलेज शिक्षण अस्पतालको सञ्चालन स्वीकृति विवादमा तानिएकी थिइन् ।
डा.सुनिलकुमारको अध्यक्षतामा नेपाल शल्य चिकित्सक समाजले पायो नयाँ कार्यसमिति
फेरियो वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षको मुहार
स्वास्थ्यमन्त्रीको विज्ञ सल्लाकारमा डा. रमेश ढकाल, यस्तो छ स्वास्थ्य सुधारमा उनको योजना
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान माग्यो स्वास्थ्य कर्मचारी